मलाई कारवाही गर्न धम्की दिने सबै जनताको दबाबले ‘ब्याक’ भए : डा. पुन (अन्तर्वार्ता) - Media Dabali
मलाई कारवाही गर्न धम्की दिने सबै जनताको दबाबले ‘ब्याक’ भए : डा. पुन (अन्तर्वार्ता)
सोमवार, बैशाख ८ २०७७
तपाईंलाई बिहीवारदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोजेको थियो, पत्र नै काटेको थियो, आईतवार मन्त्रालय कति बजे पुग्नुभयो ?
– हिजो रातिसम्म टाउको दुखेकाले बिहान अबेरसम्म सुतेको थिएँ । दिउँसो त्यस्तै १२ बजेतिर मन्त्रालय पुगेको थिएँ । १ घन्टा कुरेपछि मन्त्रीसहितको टिमसँग छलफल भएको थियो । उहाँहरूसँग कुराकानी भयो, करीब ४५ मिनेट छफफल गरेपछि दुई पक्षको सहमतिमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । समग्रका एक घण्टा समय सँगै बितायौं ।
तपाईं बिरामीको सेवामा सक्रिय डाक्टर तर विवादमा परेपछि सिधै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेट्ने अवसर पाउनुभयो, तपाईंले उहाँलाई के भन्नुभयो ?
– मैले आफ्नो कुरा मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रस्ट रूपमा राखेको छु । म १८ वर्षदेखि टेकु अस्पतालमा काम गरिरहेको छु । सरुवारोगबारे जनचेतना फैलाउने काममा निरन्तर बोलिरहेको छु । तर, मलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको छ । मैले हप्की–दप्की पटक–पटक खाँदै आएको छु । अहिले यो अवस्था आउन पनि मेरो दोष होइन । उहाँहरूकै हात छ । यो विषय मैले आज खुलेर भन्न पाएँ । सबैलाई थाहा छ, मलाई मन्त्रालय तानेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै मलाई दिन पठाएको पत्र फिर्ता भएको हुनुपर्छ, अर्को पत्र पनि त्यही कारण बनेको हो । तर सुधारिएकै पत्र भए पनि मलाई मन्त्रालय बोलाउनु ठीक होइन, अझ समय त यो ठीक हुँदै होइन । यी सबै कुरा भनेपछि मन्त्री पनि गम्भीर हुनुभयो । योबीचमा उहाँले बाहिरको प्रतिक्रिया पनि बुझेजस्तो लाग्यो ।
– ममाथि कारबाहीको तयारी भएको थियो भन्ने त मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नि । डाक्टर भएर किन जान्ने हुने ? चेतना फैलाउँछु भन्दै किन बोल्ने ? आवश्यक परे मन्त्रालयका प्रवक्ता बोल्छन् भनेर त मिडियामा उहाँहरूले बोल्नुभएकै हो नि । छापिएकै छ नि । तर यो महामारीका विषयमा विज्ञ डाक्टर नबोलेर को बोल्ने भन्ने मेरो अडान अहिले पनि छ । किनकि चेतना फैलायो भने संक्रमण रोकिन्छ, त्यसैले चेतना फैलाउनु त हाम्रो धर्म हो भन्ने मेरो भनाइ छ । महामारीका बेला निरन्तर बिरामी जाँचिरहेको डाक्टरलाई स्वागत गर्न त पत्र अवश्य काटिएको थिएन । तयारी त कारबाहीकै थियो । तर, आइतबार म मन्त्रालयमा पुग्दा स्थिति फेरिएको थियो । असाध्यै राम्रोसँग कुराकानी भयो । म मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै कुरा मिलिसकेको रहेछ । यसलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका हुन् । तर, अहिले हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेपछि मैले हुँदैन भन्ने कुरै भएन । मिलेर कोभिडविरुद्ध लडौं, आपसमा नलडौं त मैले नै भन्दै आएको छु । त्यसैले उहाँहरूको प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरें । तर, अब मिलेर अघि बढ्ने हो, कोरोनाविरुद्ध संगठित अभियानमा पहिलेजस्तै सक्रिय हुने हो ।
तर तपाईं आफैंले जारी गरेको वक्तव्यमा सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्नुभएको छ, खासमा त्यसको अर्थ अलिक स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
– स्पष्ट कुरा के भने मैले ‘मेन स्ट्रिम’ मिडियाको बारेमा त्यस्तो सोचेको पनि छैन । तर, सञ्चारमाध्यम त अनेक छन् नि । दर्ता भएका हुन् कि होइनन्, कहिल्यै नाम नसुनिने, तर अनेक समाचार दिने माध्यम पनि छन् । युट्युब च्यानलको शैली त्यस्तै छ । तिनीहरूले मलाई पनि गाली गरेका छन्, अनेक भनेका छन् । मन्त्री र डाक्टरबीच सीधै भनाभन भनेर बोलेका छन्, लेखेका छन् । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमबारे मात्र मेरो टिप्पणी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेको सन्दर्भ पनि मेरो वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ ।
यो प्रसङ्गमा मूलधारका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनले तपाईंको भनाइ छापेका छन्, तपाईंको पक्षमा बोलेका छन् । नयाँ पत्रिकाले पनि आइतबार तपाईंको विस्तृत अन्तर्वार्ता लिएको थियो । त्यो अन्तर्वार्ता छापिएपछि तपाईंको केही गुनासो छ ?
– गुनासो होइन, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धेरै मिडियाले मलाई साथ दिनुभयो । शेरबहादुर पुनलाई व्यक्तिगत रूपमा माया गरेर होइन, एउटा पेशाकर्मीलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन भनेर उहाँहरूले लेख्नुभएको हो । अझ नयाँ पत्रिकाले त मेरो पृष्ठभूमिसहित त्यति ठूलो स्थान दिएर आवाज उठाइदियो । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र न्यायको पक्षमा बोल्ने नेपाली मिडियाप्रति म गर्व गर्छु । मिडियाकर्मीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिनुभयो, त्यसैले त मलाई कारबाही गर्ने तयारी स्थगित भयो । अस्पतालमा पुगेको पत्र किन परिवर्तन भयो भन्ने त सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ होला । आज म मन्त्रालय उपस्थित हुन नपाउँदै मेरो आवाज मिडियाबाट मन्त्रालय पुगिसकेको थियो । समाचार कारण जनताको दबाब बढेको हो । यसले गर्दा नै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । अन्यथा कति धम्की आउँथे, मलाई थाहा छ । तर मिडिया र जनताका कारण आईतबार माहोल पूरै परिवर्तन भयो । यही प्रसंगमा पनि म भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूजस्ता मिडियाकर्मीले अन्यायको विरुद्ध बोल्नुभएको छ, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको छ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुभएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । मलाई चिठी लेख्नेदेखि धम्की दिनेसम्मका काम भएका थिए, मिडियाकै कारण ती सबै ‘ब्याक’ भएका हुन् । यो सब प्रसङ्गमा एक दिन म आफैंले लेख्नेछु । तर न्यायको पक्षमा उभिने मिडिया, देश तथा विदेशमा रहेर मप्रति माया, सद्भाव व्यक्त नेपालीप्रति आभारी छु ।
– तपाईंले यो समितिमा बस्नुपर्छ भनिएको छैन । फेरि मेरो प्राथमिकता अस्पतालमा बिरामी हेर्ने नै हो । समय मिले सल्लाह–सुझाव दिन जाउँला । फेरि आइतबारको छलफलपछि त नियमित मन्त्रालय आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
– मैले एउटै कुरा भन्दै आएको छु । जसरी हुन्छ– कोभिड– १९ सँग लड्ने हो । यसअघिका थुप्रै महामारीविरुद्धको लडाइँ पास गरेकाले मलाई अहिले पनि डर लागेको छैन । कोरोना साम्य नहुँदासम्म हाम्रो सामूहिक लडाइँ जारी रहन्छ । म मानसिक रूपमा पनि तयार भएर बसेको छु ।
– आगामी दिनमा पनि देश र जनताको स्वास्थ्यमा नियमित योगदान दिनेछु । जनतालाई नियमित सुसूचित गराउने कुरामा म निरन्तर लागिरहने छु । (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार)
सोमवार, बैशाख ८ २०७७०६:३०:३४
केपी ओलीको प्रश्न : विदेशबाट नेपालीलाई आउन दिएर गाउँगाउँ कोरोना छर्न दिनुपर्छ ? (अन्तर्वार्ता)
कांग्रेस फुटको होइन एकजुटको अहिलेको आवश्यकता हो : महर्जन